Cabdi Xaashi: Farmaajo faraha kala bax doorashadda Somaliland | KEYDMEDIA ONLINE
Cabdi Xaashi: Farmaajo faraha kala bax doorashadda Somaliland
"Farmaajo faraha kala bax doorashadda Xildhibaanadda gobollada waqooyi, u ogolow inay iyagu dhistaan gudiga, si lamaid ah Maamul Goboleedyada kale", ayuu yiri Cabdi Xaashi.
MUQDISHO, Soomaaliya - Dowladda Federaalka xaq uma lahan inay magacowdo guddiga doorashada ee Xildhibaanada Somaliland, sidaasi waxaa yiri guddoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi, isagoo intaasi ku daray hadalkiisa in tallaabadani ay wax u dhimeyso madaxbanaanida geeddi-socodka soo xulista Xildhibaanada gobollada Waqooyi.
Cabdi Xaashi u diray Madaxweyne Maxamed Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaare Maxamed Rooble warqad ku taariikheysan 1-da Novembar, oo ugu sheegay inaysan sax ahayn in DFS ay magacowdo guddiga Somaliland, iyadoo Maamul Goboleedyada loo ogolaaday inay iyagu magacaabaan.
"Dowladda Federaalku xaq uma laha inay guddi u magacowdo Somaliland maadaama aysan magacaabin xubnaha guddiga ee ka socda dowlad goboleedyada xubnaha ka ah federaalka," ayuu yiri afhayeenka Aqalka Sare.
Wuxuu ku baaqay in la raaco hanaankii 2016 kaasoo u saamaxay gobol kasta oo ay ku jirto Somaliland inuu magacowdo gudigiisa doorashooyinka heer dowlad goboleed. Marka loo eego heshiisyadii ay wada galeen Farmaajo iyo hoggaamiyeyaasha Maamullada 17-kii September, doorashadda wakiillada Somaliland ayaa ka dhici doonta Muqdisho.
Dowladda Federaalka ayuu heshiiska dhigayaa inay magacowdo guddiga doorashadda Xildhibaanada labada aqal ee Baarlamaanka ugu mateli doono Maamulka Somaliland. Waa arin ay diidan yihiin siyaasiyiinta DF katirsan ee kasoo jeeda Waqooyiga.
HOOS KA AKHRI QORAALKA CABDI XAASHI: